မြန်မာနှစ်သစ်ကူးကာလ နေရပ်ပြန်ကြမည့် ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားများ နယ်စပ်အဝင် အထွက်များတွ? - Yangon Media Group
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးကာလ နေရပ်ပြန်ကြမည့် ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားများ နယ်စပ်အဝင် အထွက်များတွ?
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄- မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူး(သင်္ကြန်)ကာလ နေရပ် ပြန်ကြမည့် ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားများ နယ်စပ်အဝင်အထွက်များတွင် ထိုင်းလဝက၏ အဝင်၊ အထွက် တံဆိပ်တုံးများ မဖြစ်မနေ ထုသွားရန် အလုပ်သမား သံအရာရှိရုံးက သတိပေး လိုက်သည်။
အဆိုပါ သတိပေးချက်ကို ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာအလုပ် သမားသံအရာရှိရုံးမှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် ညက သတိပေးချက်ထုတ် ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ ထိုင်း လဝက အဝင်အထွက် တံဆိပ်တုံး ထုခများ သက်သာစေရန်လည်း နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတို့ ညှိနှိုင်းထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် မပျက်ကွက်ကြ ရန် သတိပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ခွင့်နဲ့ ပြန်ကြမယ့် မြန်မာလုပ် သားတွေအနေနဲ့ ထိုင်းကို ပြန်လာပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် တံဆိပ် တုံး မဖြစ်မနေထုသွားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းက ထွက်ခွာချိန်မှာ Immigration Law & Re-Entry တုံးထုသွားဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ်သားတွေ ထိုင်း နိုင်ငံရဲ့ ဂိတ်ပေါက်တွေကနေ တရားဝင် ထွက်ခွာနိုင်ဖို့ တရား ဝင် ပြန်ဝင်နိုင်ဖို့နဲ့ တုံးထုခစရိတ် သက်သာဖို့ကိုလည်း အစိုးရချင်း ညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် တုံး ထုဖို့ မပျက်ကွက်ကြပါနဲ့လို့ သတိ ပေးတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု အလုပ် သမားသံအရာရှိတစ်ဦးက ပြော သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ကာလအတွင်း မိမိတို့၏ နေရပ်အသီးသီးသို့ ပြန်ကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးအနေဖြင့် သင်္ကြန်ခွင့်ကိစ္စရပ်အတွက် မိမိအလုပ်ရှင်ထံမှ တရားဝင်ခွင့်တင် ပြဆောင်ရွက်ရန်၊ မိမိနဲ့ မသက်ဆိုင် သော လူကြုံပေးသည့်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်ခြင်း မရှိစေရန်နှင့် လမ်းခရီးလုံခြုံ ချောမွေ့စေရေးအတွက် အသုံးပြုမည့် ယာဉ်အား ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရန် သတိပေးထားသည်။
ယင်းအပြင် မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ကာလ ခွင့်ပြန်ခြင်းခရီးစဉ်များအတွက် အကြံပြုလို သည်များ၊ အလုပ်သမားသံအရာရှိ ရုံးအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုသည်များရှိပါက အလုပ်သမား သံအရာရှိရုံးသို့ ဆက် သွယ်အကြံပြု ပေးပို့နိုင်ကြောင်း ဆိုထားသည်။
အိုင်ယာလန်မှ အင်္ဂလန်သို့ ပြောင်းလဲကစားရန် ဒီကလန်ရိုက်စ် ဆုံးဖြတ်
ငွေလဲလှယ်ရေးရုံးကို ဓားပြတိုက်သူ ရုရှားလူမျိုးအား ဘာလီရဲတပ်ဖွဲ့ ပစ်သတ်
အမေရိကန် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး ဒေါ်လာသန်း ၇ဝဝ နီးပါးတန် Powerball ထီဆုကြီးပေါက်
(၇၁) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
မဟာ သကျမာရဇိန် ကျောက်တော်ကြီး မြတ်စွာဘုရား ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များနှင့် ရဟန္တာ ရုပ်ပွားတော်များ